Asan'Andriamanitra isika - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > nataon'i Josepf Tkach > Asan'Andriamanitra isika
Taona vaovao no manomboka eto amin’ity tontolo misavoritaka ity raha mbola manohy ny diantsika mahatalanjona hatrany hatrany amin’ny fanjakan’Andriamanitra isika! Araka ny nosoratan’i Paoly, dia nataon’Andriamanitra ho olom-pirenen’ny fanjakany isika rehefa “nanafaka antsika tamin’ny fahefan’ny maizina ka namindra antsika ho amin’ny fanjakan’ny Zanany malalany, izay ananantsika fanavotana, dia ny famelan-keloka.” ( Kol. 1,13- iray).
Satria any an-danitra ny zom-pirenentsika (Fil. 3,20), manana adidy isika hanompo an’Andriamanitra, ho tànany sy ho sandriny eo amin’izao tontolo izao, amin’ny fitiavana ny mpiara-belona amintsika tahaka ny tenantsika. Satria an’i Kristy isika, fa tsy ny tenantsika na ny tontolo manodidina antsika, dia tsy tokony hampiaraka ny ratsy. mandresy, fa tokony handresy ny ratsy amin’ny soa (Rom. 12,21). Andriamanitra no manana ny fitakiana voalohany amintsika, ary ny fototry ny filazana izany dia ny nampihavanany antsika tamin-kalalahana sy tamim-pahasoavana ary nanavotra antsika fony isika mbola tao anatin’ny fanandevozan’ny fahotana.
Ity dia tantara mahafatifaty izay mampiseho fahamarinana mahagaga sy mahatalanjona. Tahaka an’i Paoly ao amin’ny Kolosiana 1,12 Nanoratra izy hoe, “Andriamanitra no nanao antsika ho mendrika ho lova amin’ny olona masina ao amin’ny mazava”. Noharian’Andriamanitra isika, nampihavanina sy navotana tamin’ny alalan’i Kristy, satria fotsiny hoe tia antsika Andriamanitra! Iray amin’ireo andinin-teny tiako indrindra ny Efesianina 2,1-10. Mariho ireo teny amin'ny soratra matevina:
Inona no mety hampahery kokoa? Tsy miankina amintsika ny famonjena antsika fa miankina amin’Andriamanitra. Satria tia antsika tokoa izy, dia tao amin’i Kristy no nanaovany izay rehetra nilaina mba hahazoana antoka izany. Isika no zavaboariny vaovao (2 Kor. 5,17; Gal. 6,15). Afaka manao asa tsara isika satria nanafaka antsika tamin’ny fatoran’ny fahotana Andriamanitra ary nitaky antsika ho an’ny tenany. Isika no nataon’Andriamanitra antsika ary Izy no mandidy antsika fa tokony ho toy ny tenantsika tokoa isika - ilay zavaboary vaovao izay nataony tao amin’i Kristy.